Inona ny Forecaddie amin'ny gile ary inona ny adidy?
Inona no tadiaviny ary inona no andraikiny
Ny predaddy, izay tena tsotra, dia olona iray miorina mialoha ny lavaka eny amin'ny golf izay ny asany dia ny manara-maso ny sarin'ireo mpilalao baolina rehefa samy milalao ny baoliny amin'ny golf.
Mifanohitra amin'izay mety eritreretinao, tsy hoe kaddy akory ny tohin'ny adiresy. Ny fitadiavana ny adiresy dia tsy mitondra ny klioba na iza na iza, tsy manampy ny mpilalao golf amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny zavatra toy ny fifidianana klioba, sy ny sisa. Ary raha mbola azo atao ny manatontosa fifanarahana miaraka amin'ny tarika mpihazakazaka amin'ny andavanandrom-pandrosoana, dia matetika izy ireo no tendrena amin'ny lavaka manokana amin'ny kianja golf raha tokony ho an'ny mpilalao golf.
Ny ankamaroan'ny mpilalao gilasy mpankafy dia tsy hihaona velively mandritra ny lalao, raha tsy mandray anjara amin'ny fifaninanana izy ireo.
Forecaddie ao amin'ny fitsipika
Ny famaritana ofisialy, famaritana ny fitsipika momba ny "forecaddie", araka ny nosoratan'ny USGA sy R & A ary araka ny hita ao amin'ny Regulations of Golf dia izao:
"A queryaddie dia iray ampiasain'ny Komity hanondro ny mpilalao ny toeran'ny baolina mandritra ny lalao. Maso ivoho izy."
Satria ny forecastaddie dia voafaritra ho birao ivelany ao amin'ny fitsipika, raha misy baolina kitra an-tapitrisany miala sasatra dia manosika azy tsy hisy sazy ho an'ny mpilalao golf ary tokony hosoloina ny baolina ( Fitsipika 18-1 ).
Raha toa ka mamibiby na manakana baolina mihetsika ny mpanadinadina iray, dia mihosotra ny maitso ary ny baolina dia milalao rehefa mandainga - afa-tsy rehefa mivoaka ny bala amin'ny birao ivelany; na rehefa nilalao teo am- pametahana ny maitso . Jereo ny fitsipika 19-1 ho an'ny lahatsoratra sy fanazavana feno, miaraka amin'ny hetsika ho an'ireo tranga ireo.
Moa ve Forecaddie na Forecaddy?
Ny Forecaddie, miaraka amin'ny "ie" amin'ny farany, no tsipelina marina. Io no soratanana ampiasain'ny fitondram-pitondrana gulf, USGA sy R & A, ary ampiasaina amin'ny fitsipika. Na izany aza, ny "caddy" sy ny "forecaddy," izay mamarana ny "y", dia ampiasain'ireo mpankafy sy tsy mpilalao golf, ary ireo sora-baventy ireo dia miditra ao anaty bokin'ny golf.
Noho izany na dia isika (sy ny vondrona governemanta) aza dia mihevitra ny caddy-with-ay ho diso tsipelina, dia matetika no ampiasaina ny fitenenana, ary heverina fa mety.
Andraikitry ny Forecaddie
Ny asan'ny forecastaddie dia ny hitazona ireo mpilalao golf ho eny an-dalana amin'ny alàlan'ny fanarahamaso ny baolina kitra rehetra amin'ny golf ary mamela ny mpilalao tsirairay ao amin'ny vondrona hahalala ny toerana misy ny baoliny.
Ohatra, mpilalao iray ao amin'ny tarika dia mamely ny baoliny ho avo loha. Ny searchesaddie dia mikaroka ny baolina, ary manondro azy amin'ny mpilalao mba hitazonana tsy misy hatak'andro ny lalao. Ao amin'ny fampitaovana amin'ny fahitalavitra ny fifaninanana matihanina dia mety ho hitan'ny olona sasany ivelan'ny fiarandalamby hitifitra baolina iray hitifitra rindrina ary hibata ny sainam-borona kely mankany amin'ny tany akaikin'ny baolina. Izany dia fanamarinana.
Ny fitsidihana an-dalamby amin'ny fifaninanana fifanintsanana dia mety hitondra sainam-piaramanidina lehibe kokoa na tsangantsanganana na endri-tsoratra hafa izay karazany amin'ny mpilalao golfa amin'ny tee amin'ny endriny mba hanondroana raha misy baolina any amin'ny làlana madiodio, amin'ny lozam-pifamoivoizana, na angamba angamba very na tsy misy fetra. Azonao atao angamba ny mahita ny fanatontosana manao izany mandritra ny fampielezana ny fahitalavitra golf.
Araka izany, araka ny hitanao, ireo mpilalao golfa izay milalao an-dalam-pikarakarana dia mety hahatsikaritra kokoa ny mpizaha tany fa ireo izay tsy. Mpilalao golf izay tsy dia mahita afa-tsy fironana amin'ny fialantsasatra fotsiny.
(Na dia mety ho toy ny iray monja aza ny fehezan-dalan'ny fitsangantsanganana.) Ny sasany amin'ireo fianarana an-dalam-pivoarana sy fitsangatsanganana dia manome ny safidy amin'ny fanombohana ahafahan'ny vondrona mpilalao golf mandray.
Ny R & A, araka ny tari-dalany amin'ny mpikarakara ny fifanintsanana, dia milaza fa:
"Ny Komity dia afaka mametraka ny toeran'ny fanatanjahantena any amin'ny faritra mety misy ny baolina very, na ny marika / mpilalao baolina kitra dia mety hangatahana hanatontosa io andraikitra io. Ny politika toy izany dia afaka manampy amin'ny ambaratonga raha toa ka misy bala afaka hita haingana na raha mpilalao dia azo raisina tsara fa tsy nisy bolona tsy hita ary noho izany dia amporisihina ny milalao baolina vonjimaika . Amin'izay ny mpilalao rehetra dia milalao amin'ny fepetra mitovy ihany, ny Komity dia tokony hiantoka fa ny mpanatrika dia ny andro iray manontolo. "
Manamarika ny R & A fa "raha ny fahombiazan'ny fampiasana ny fanatanjahantena dia tsy maintsy misy politika mazava sy mahomby mba hahalalàna ny toeran'ny baolina amin'ny mpilalao.
Mbola zava-dehibe kokoa aza ny hoe ny rafitra dia tsy misy dikany raha toa ka manamarika ny tohin'ilay adiresy hoe raha misy baolina ao anaty na tsy misy sisintany. "
Pink Lady (na Pink Lady Tournament)
Ny fahasamihafana eo anelanelan'ny alikadia sy ny vy
Manilika ny "Demokrasia indrindra amin'ny demaokrasia"
Vato mitandahatra eo amin'ny National Park National Park
Inona avy ny tifitra tapaka amin'ny gileo?
Ahoana no fomba hananganana mpilalao Kicker Ramp
Fehin-kevitra amnesty basketball
Fitsipika momba ny ping pong amin'ny sanda mitazona
Inona no atao hoe marika baolina amin'ny golf?
Inona ary - Aiza ny Borkeran'ny Fiangonana?
Hazavao ny tavoahangy tranainy amin'ny gile
5 Fahadisoana natao mba hisorohana ny fampiofanana amin'ny sekoly tsy miankina
Mampiasa Evernote miaraka amin'ny mpanora-dalàna
Inona avy ireo mpampitahotra (fantatrao, toy ity) manao ny fampahafantaranay?
Ahoana ny fampiasana ny tolotra mailaky ny USPS
Iza amin'ireo firenena no miteny amin'ny teny alemà?
Ny Politika Manokana
Fanafihana ny Spade Camel!
The Chantels: "Vondrona Girl" voalohany nataon'ny Rock
Tsia, tsy teraka lehilahy i Lady Gaga
Derechos de víctimas de domenicos de violencia y castigos para abusadores
Period Archaique - Ireo Amerikana mpihaza fahiny
11 Septambra 2001 Fanafihan'ny mpampihorohoro - 9/11 Fanafihana
Karazan-tsarimihetsika Krismasy 17
Fandaniana mpianatra ho an'ny mpianatra amin'ny oniversite an-tserasera
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny italiana
'Du coup': ny adverb français français izay midika fa tsy misy na inona na inona
Inona no atao hoe Zoma Tsara?
KRISMASY no manondro ny dikany sy ny niaviany
Fanavaozana ny fitaovana famokarana
Inona avy ny fitomboana maoderina?
Fanehoan-kevitra frantsay miaraka amin'ny Trouver
Mamisoa Hevitra ho an'ny endrika sy sary
Islam tany Amerika nandritra ny fanandevozana taona
Famaritana momba ny fifandraisana amin'ny serasera sy ny ohatra
Ahoana ny fomba hamahana ny mofomamy amin'ny sidina